>"very busy" generals | MoeMaKa Burmese News & Media
>"very busy" generals
October 23, 2009>မိုးမခတောထဲက သတင်းအပိုင်းအစများ
အလုပ်သိပ်များတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး) ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေး ဆင်ဆာ ဖြတ်ခံရသလား အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းအောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂ဝဝ၉Ko Maung Aye, where is your umbrella?
ဒီတပတ်အတွင်း ထွက်လာတဲ့ သတင်းစာတွေမှာ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ အလုပ်သိပ်များနေပုံတွေကို တွေ့နေရတယ်။ တရုတ်ပြည်၊ ထိုင်းပြည်တို့မှာလုပ်တဲ့ အစည်းအဝေး သွားတက်ကြသူတွေကို လေယာဉ်ကွင်းအထိ လိုက်ပို့တယ်၊ ကြိုတယ် ဆိုတဲ့ အလုပ်တွေပါ။ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် နံပါတ်တစ် နေရာကို ၁၇ နှစ်ကြာ ယူထားတဲ့သူတယောက် အခုလို ကြိုပို့အလုပ်တွေနဲ့ မအားမလပ် ဖြစ်နေရှာတယ်။ မြန်မာပြည်သားတွေဟာ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ခေါင်းဆောင်ကောင်း တယောက်ကို ရထားကြတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ။ တချို့က ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေကို စွပ်စွပ်စွဲစွဲ ပြောကြတယ်၊ တရုတ်သိုင်းကားကြည့်တာနဲ့ အချိန်ကုန်တယ် ဘာ ညာ နဲ့။ သို့ကလို အဆိုးမြင်သူများကို ဒီသတင်းစာတွေ ပေးဖတ်သင့်ပေတာပေါ့။ အသက် ၈၀ ပြည့်ခါနီးပေမယ့် ပြည်သူတွေအတွက် နောက်ဆံတွေတင်းပြီး ပင်စင်မယူ၊ အငြိမ်းစား မယူ၊ အနားမယူ၊ အားလပ်ရက်မယူ၊ ခွင့်မယူ၊ အခွင့်အရေးတွေ မယူနိုင်ဘဲ တာဝန်တွေ ထမ်းနေတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကို ဂုဏ်ပြုချီးကျူးသင့်တယ်လို့ မထင်ကြဘူးလား။ မိုးမခအယ်ဒီတာမင်းများကို အကြံပြု တောင်းဆိုပါရစေ။ နှစ်စဉ်ပေးမယ့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုတခုကို စီစဉ် ဖန်တီးပါ။ ဒီနှစ် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်အတွက် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေကို ပေးပါ။ ဟုတ်ကဲ့ – ဒီနှစ် ပေးမှ ဖြစ်မှာပေါ့ အယ်ဒီတာမင်းများခင်ဗျာ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုတခုကို လူတယောက် သေဆုံးပြီးမှ ပေးတယ်ဆိုရင် ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ။
ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေး ဆင်ဆာ ဖြတ်ခံရသလားကြိုပို့အလုပ်တွေနဲ့ မအားမလပ် ဖြစ်နေတဲ့ နောက်တယောက်ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု သူလည်း ပူးတွဲ ရသင့်ပါကြောင်း အဆိုတင်သွင်းပါရစေ။
ဟိုနေ့က သတင်းစာတွေမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ လေယာဉ်ကွင်းထဲ လမ်းလျှောက်နေပုံကို မျက်နှာဖုံး တင်ထားကြတယ်။ လိုက်ပို့ခံရသူတယောက်က ဗိုလ်ချုပ် သီဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ နာမည်မှာ စာလုံး ၈ လုံး ရှိတဲ့အတွက် ရှစ်လုံးလို့ ချစ်စနိုး ခေါ်ကြတယ်။ ဒီနာမည်ကို သူသိချင်မှ သိမယ်။ သိရင်လည်း ချစ်စနိုး အခေါ်ခံရတဲ့အတွက် ပီတိဖြစ်နေမယ်လို့ ယူဆရတယ်။
ရှစ်လုံးပါတဲ့ ဓာတ်ပုံကို ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အီးမေးလ်နဲ့ လက်ဆင့် ကမ်းကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေးအတွက် မိုးထားပေးတဲ့ထီးကို တစုံတယောက်ရဲ့ အမိန့်နဲ့ ဆင်ဆာ ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ ပို့လာတဲ့ အီးမေးလ်မှာ ရေးထားလေရဲ့။
ဒီအီးမေးလ်ကို လက်သံပြောင်တဲ့ မြန်မာထောက်လှမ်းရေးတွေ မရပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ တော်ကြာ သတင်းစာတိုက်က ကွန်ပျူတာသမားတွေ စစ်ကြောရေးမှာ ဘာဖြစ်သွားတယ် ညာဖြစ်သွားတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ကြားနေရဦးမယ်။
မောင်မောင်စိုး - ကိုးကန့်ပြဿနာ - အပိုင်း (၁)	ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး - မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် တရားခံများ	ငြိမ်းချမ်းအေး - ဒီမိုကရေစီနည်းကျ သရော်ပါ	သတင်းထောက် အောင်နေမျိုးကို ရဲက ဖမ်း	ပျော်တော်ဆက် သာဂိ - အကောင်းမမြင်သမားရဲ့ ဆွမ်းတော်ခွက်	ဖိုးစီ (ရုံးတော) - တန်ရာတန်ကြေး	မောင်ရစ် - ၂၀၁၃ ဘော်စတွန်အကြမ်းဖက်မှု အမေရိကန်တို့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ပုံ	ေ အာင်ဝေး- ငါ တို့ဆ က် ချီ တ က် မှ ဖြ စ် မ ယ်ကျော် ကို ကို	အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) - ဘင်္ဂလားဒေ့ဂ်ျနှင့် ရုရှားနုိုင်ငံတုို့မှ ရယူစရာ အစွန်းရောက်ဝါဒသင်ခန်းစာ	ကာတွန်း ATH - ဒါ ဒို့ နဂါးနီ	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများမန္တလေး၊ ဘုရားကြီးဝင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးနေ့ ဖိတ်စာ
U Wirathu - အိမ်ကွင်းမှာ မရှုမလှ ရှုံးနိမ့်နေရသော ရွှေဗမာ Adv- Vanishing Treasures of Myanmar
စာပဒေသာ ကောက်စာများဖေဖေါ်ဝါရီအမှတ်တရ စာပေဟောပြောပွဲ - ဦးဘုန်း (ဓါတု) မေတ္တာနေခြည်အောက်က သောကနှင်းပေါက်ကလေးတွေ
မောင်အောင်ထက် - အညာပင်လယ်ပေါ် လက်ပစ်ကူးခြင်း မိုးမခကို နောက်ယောင်ခံပါ
မိုးမခမှာ အသစ်တင်တိုင်း သင့်အီးမေးထဲကို အရောက်ပို့မယ်။ Join 1,295 other subscribers
Yan Naung (Bo Ta Htaung) (166)
သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ (581)
လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ (196)
Cartoon Box (1,439)
By admin မိုးမခမဂ္ဂဇင်း အောက်တိုဘာလထုတ် ထွက်ပြီ၊ (အတွဲ၁၊ အမှတ် ၇၊ ၂၀၁၄) မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ၊ ၄၊ ၂၀၁၄...Read more » Recent CommentsDr. Maung Maung Gyi on ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး – မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် တရားခံများHsu Zin on ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး – မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် တရားခံများKyaw Mya Gyi on ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး – မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် တရားခံများDr. Maung Maung Gyi on ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး – မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် တရားခံများDr. Maung Maung Gyi on ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး – မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် တရားခံများသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာကို အနည်းဆုံး ၁ ဒေါ်လာ လှူပြီး မိုးမခကို ကူညီပါ	မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါ